ကျိုက်ထီးရိုးသွား..တောလား(၃) ~ သမီးစံ
အစ်မတွေကို..အားကျလို့..မျက်မှန်တပ်ကြည့်လိုက်တာ..မဆိုးဘူးပဲနော်း) (ပြောပေးကြပါစိတ်ချမ်းသာအောင်..လှတယ်လို့း)
ဟိုး..နောက်က..ဥာန်းဆင်ထားတဲ့စေတီက..မုဆိုးတောင်ဘုရားပါ။ ကျီးကန်းပါးစပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊မုဆိုးတောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကျောက်ထပ်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်နေရာကိုသွားချင်သွားချင်ဘုရားရင်ပြင်ပေါ်ကို..ဖြတ်ပြီးမှ..ရောက်ပါတယ်။ဘုရားရင်ပြင်က.အမျိုးသမီးတွေကို စကပ်၊ဘောင်းဘီ(ရှည်၊တို)တွေနဲ့..တက်ခွင့်မပေးတော့..သမီးစံတို့ညီအစ်မတွေ..ဒုတ်ကောက်နဲ့လှလှတွေ့ကြပါသေးတယ်း)။
(ရင်ပြင်တော်ရဲ့..ဟိုဖက်ရောက်ရင်..ထဘီတွေနဲ့..ဘယ်လိုမှ.မဖြစ်ဘူးလေ။ )နောက်တော့.ဘုရားပေါ်က.လုံခြုံရေးတွေကပဲ..အကြံပေးကြပါတယ်.အပေါ်က.ထဘီထပ်ဝတ်ပြီးတက်ပေါ့တဲ့။ထဘီငှားခ..ငါးရာကျပ်ပါတဲ့..။ကွယ်..ဒီလိုဆိုနီးနီးလေးပဲ..ဖြစ်ပါဘူးလေဆိုပြီး..အခန်းပြန်.ထဘီပတ်ပြီးဘုရားပေါ်ပြန်ကိုတက်ကြပါတယ်။ညဖက်ရောက်မှပဲ..ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး..ထဘီလေးနဲ့တက်တော့မယ်ကွယ်နော်။လောလောဆယ်တော့..နှစ်ထပ်ဝတ်ရတာပေါ့း)။
မုဆိုးတောင်..စေတီတော်အတွင်း.ကိန်းဝပ်စံပယ်တော်မူနေသည့်.ဆင်းတုတော်(အိမ်က..တစ်ရာတန်အုပ်လေးတွေ.ထည့်ပေးလိုက်တော့ လှူရတန်းရတာ တော်တော်အဆင်ပြေသွားပါတယ်)နောင်နှစ်များမှာလည်း..ဒီ့ထက်မက..လှူနိုင်အောင်..ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်
ကျောက်ဂူအတွင်းမှာ.ကိန်းဝပ်ဆံပယ်တော်မူနေတဲ့နာက်ထပ်.ဆင်းတုတော်တစ်ဆူ သမိုင်းဝင်ငွေသာလျောင်းအောင်မြေ နဲ့.သမီးစံရဲ့အစ်ကိုတော်..ကိုလူမှုရေးဖြစ်ပါတယ်း)
တောင်ဆိတ်ဆီ..အရောင်းဌာနဖြစ်ပါတယ်..။ မယုံမှာစိုးလို့အကောင်လိုက်နီးပါးပြထားလေရဲ့း)
ရေနွေးကြမ်းလေးသောက်လိုက်.၀ါးလိုက်..လေကလည်းတဖြူးဖြူးနဲ့ဆိုတော့.အမောကို ပြေသွားတာပဲ ။
သနားစရာကွယ်..သူ့ခမျာ .. အားလုံးဝိုင်းရယ်ကြမှ..သမီးစံလည်း.သတိထားမိတာ (ဖြစ်ပုံ)
Posted in: ဘုရားဖူးခရီးစဉ်
ဟေးးးဟေးးးတို့အရင်ဆုံးပါကွယ်..ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားသွားခဲ့ရတာတွေကိုလွမ်းလိုက်တာလေ..ခုဆိုမေ၇ာက်ဖြစ်တာကြာပေါ့ ညီမ၇ယ်..ကျိုက်ထီးရိုးသွားခဲ့သမျှရေတံခွန်တခါမှကိုမရောက်ခဲ့တာပါကဲ..ရေတံခွန်သွားတဲ့ခရီးအကြောင်းစောင့်နေမယ်နော်ခင်တဲ့ ပစ်ပစ်
သမီးစံက နှစ်ထပ် ဖက်ရှင် နဲ့ဆိုတော့ ပို.. ဝ လာသလိုပဲ.. အဲ.. ဟုတ်ပေါင် ပို လှလာတယ် ပြောတာနော်။ :P ကျိုက်ထီးရိုး ဘုရားကို အနီးကပ် ဖူးမြော်ခွင့်ရအောင် ရိုက်လာခဲ့တဲ့ သမီးလေးကို အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်...။အန်ကယ်ဇော်... :)
သမီးစံက မျက်မှန်မပါမှပိုကြည့်ကောင်းတယ်။ မျက်မှန်နဲ့ကျတော့ ဟ၀ှာနဲ့ တူသွားတယ်။ မျက်မမြင်လေ။ အပေါ်ဆုံးပုံကိုပြောတာ။ အဲ့မျက်မှန်ကို ဝေးဝေးသာရှောင်ပေတော့။ (နောက်တာနော် ချိတ်ချိုးနဲ့)
ဗျို့ ..အပိုကြီး..အဲမှားလို့အပျိုကြီး..လှတယ်လို့ ပဲ မျက်စေ့မှိတ်ပြောပါတယ်နော်..မျက် မှန် ကြီးနဲ့ ..ချော်လည်းမှ နုတ်သီး ဓဏ်ရာရနေပါ့မယ်..ထမင်းရေလေးပဲ..ပလပ်လပ်..အနားလည်းယူအုံးနော်. တာဇံနဲ့ တွေ့ လာလား..မျော်နေတယ် အဲ့ပို့ စ်တင်မဲ့နေ့ 
ဘုရားပုံတွေ့လျှင် ဘုရားဖူးလိုက်၊ ရယ်စရာတွေ့လျှင် ရယ်လိုက်၊ စားစရာတွေ့လျှင် သွားရေကျလိုက်နဲ့ကွယ်။ ကြည့်ရှုရ၊ ဖတ်ရတာပျော်စရာကြီး ဆုရွှန်းလဲ့ရယ် အဲဟုတ်ဖူး ဂျင်ဆန်းမီရယ်။
အားပါး နှမတော် ကကိုက်ပေးကတော့ကြမ်းပါ့ဗျာ အဟင့် အကိုတော်သွားတုံးက ကျိူက်ထီးရိုးကို ဖူးခဲ့ရ၀ူးလေ ဖျာဒေပတ်ထားတယ်လေ ဟီးးးးးးး
ပျော်စရာကြီး။အခုတောင် ထသွားချင်စိတ်ပေါက်မိတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေကလဲ ကောင်းမှကောင်းကောင်းဘဲ။ လင့်ခ်ချိ်တ်ထားပြီးပြီထင်နေတာ။ မချိတ်ရသေးဘဲကိုးးး။ ချိတ်လိုက်ဦးမယ်။ ရေးတတ်သလိုရေးသွားသည်။ အားမနာတော့ဘူးးးး။း)ခင်မင်လျှက်
ဝေးး တောင်ပေါ်ရောက်ပြီကွ.. တော်သေးတယ် လမ်းတစ်ဝက်မှာ လမ်းပျောက်နေမှာစိုးလို့း)ရှုခင်းတွေလှလိုက်တာ သမီးစံရယ်တောင်တွေများ အထွတ်ထွတ်နဲ့ အဆင့်ဆင့် .. လှချက် ..ကျိုက်ထီးရိုးလည်း သပ္ပါယ်လိုက်တာ ဘယ်ချိန်ဖူးဖူး ဖူးမဝဘူး.. ညီးသွားတာက ကျုပ်ကိုယ်တိုင်သွားတာထက်တောင် စုံသေးတယ်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ဘုရားလည်းဖူး ရှုခင်းလည်း ကြည့်ရလို့ တကယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းတယ်
သွားချင်တယ်ကွယ်ဘယ်တော့မှာ ရောက်မလဲမသိဘူး ဟူးးးးးးးးးးးးအခုလည်းရောက်သလိုပဲခံစားသွားပါတယ် :)
နောက်ဘာတင်တင် စားစရာတွေမတင်ပါနဲ့ သမီးစံရယ်... ကီးဘုတ်က Water Proof မဟုတ်တော့သွားရည် အကျမခံဘူး... :D
ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး ကျိုက်ထီးရိုးကို ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလားတောင် ထင်မိတယ်...
သမန်စီးး ညည်းအေ စောစောကတော့မကြော်ညာဘူးယောင်းမတော်ဖို့ လွန်ကုန်ပါပြီအေ ..ဟိဟိ( ငါပြောတာကိုရင်မသိစေနဲ့နော်း)အမကြော်ညာလား အကိုကြော်ညာလား.ကဲဘလော့ဂါအပေါင်းတို့ရေ ..အမလေးက မဆိုးဘူးနော်း)ငါ့လိုတော့မလုပ်နဲ့နော် ရေကူးကန်မှာမျက်မှန်တပ်မိလို့ မျက်လုံးမှိာဝိုင်းပြီး ဖြူပြီး ကျန်တာမဲနေတယ် ဟိဟိ .စပါးကလဲတခါပဲသွားရတော့ ပြန်မဖြူသေးဘူးဇီကွက်ဖြစ်နေတယ် ဟိဟိး)
ကျိုက်ထီးရိုးအလွမ်းပြေလေး ဖတ်သွားတယ်။စုံစုံလင်လင်လေးတင်ထားတာ ကျေးဇူးပါ သမီးစံရေ။ရှုခင်းတွေ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် ကြည့်လို့မဝဘူး။ ကျိုက်ထီးရိုးဘုရားကြီးကို မနက်ဖက်မှာ ပန်း ဆီမီး အမွှေးတိုင် ဆွမ်း သစ်သီးတို့နဲ့ အာရုံဆွမ်းကပ်ပြီး ညဘက်မှာ ဆီမီးမြိုင်မြိုင် အမွှေးတိုင်မီးခိုးတွေ တစ်ဝေဝေနဲ့ ဖူးခဲ့ရတာကို သတိရတယ်။စိတ်ဓာတ်အစဉ်ကြည်လင်အေးမြပါစေကွယ်။မေတ္တာဖြင့်အန်တီတင့်
စတိုးဆိုင်နာမည်က မြတ်စတိုးတဲ့။ တွေ့လား မြတ်တွေ ဘယ်လောက်တည်ကြည်ကြတယ်ဆိုတာ အဟိ :P မိစံ အစ်ကို ကို ဒီတိုင်းပဲ ကြည့်သွားပါတယ်။ အစ်မ ကတော့ တော်တော်ချောတယ်နော်။
ဓါတ်ပုံ ရိုက်ချက်တွေ တော်တော်ကောင်းတယ်ကျေးဇူးပါပဲ ညီမတော်ရေ
အပျိုကြီးရေ ...ကျေးဇူးပဲနော် ... ရှု့ ခင်းပုံတွေ ယူသွားပြီနော် ...
သမီးစံရေ... ကျိတ်ထီးရိုးဘုရားဖူးအမှတ်တရပုံတွေ ကြည့်ရှုသွားတယ်နော်.. မျက်မှန်ကြီးနဲ့ ပစ်တိုးရီးယားပုံရောပဲ..ချမ်းမြေ့ပါစေဟုချယ်ရီမြေ
မြန်မာနိုင်ငံတော် ၏ ဗုဒ္ဓ သာသနာတော် သမိုင်း အပိုင်း (၁)